Download IRIS P-40 Warhawk - Ny Fanandramana FSX & P3D - Rikoooo
Downloads 8 389
Taorian'ny famoahana ny fonosana "Aces of the Commonwealth" FSX Miara-miasa amin'i Iris Curtiss P-40E Kittyhawk, Iris dia nanapa-kevitra ny hampiasa ny eritreriny ary hanome vokatra vaovao ahitana karazany roa hafa an'ny P-40 Warhawk, ny P-40T ary ny P-40X.
Ny P-40T dia kambana seza, kambana maotera Variant ny P-40 airframe. Raha ny Etazonia no fanandramana amin'ny kambana maotera foto-kevitra momba ny P-40C nandritra ny ady, dia namely amin'ny fahamarinan-toerana mahantra olana ary tsy niditra tao famokarana.
Ny P-40X dia tokana seza P-40E amin'ny Natambatra ilay elatra sy ny contra-miodina Mpanosika amin'ny Merlin rafitra maotera.
2048x2048 masera bitmap pixel natambatra tamin'ny pixel 1024x1024 ho an'ny loko rehetra izay manome bara tsara tarehy mahagaga sy sary mahagaga manerana ny karatra graphics rehetra afaka mandeha FSX!
Voninkazo hafahafa avy amin'ny IRIS AudioworX miaraka amin'ny feo mitongilana 360 ho azy manokana FSX.
Ny isan-karazany mahafinaritra paintschemes mampiasa teknika tsara indrindra azo zavakanto mamela ny faran'izay weathering sy ny sary mazava.
Ny high quality paintkit weathering rehetra sosona mampiseho ireo mpampiasa mamela feno customization ny repaints be voninahitra rehetra amin'ny Pixel 2048x2048 toetra!
Ny modely faran'izay sidina avy any Jade Island Center Flight Test.
An amin'ny lalina mpanamory boky rehetra ny fanazavana tokony ho fantatrao mba miasa ny IRIS P-40 Warhawk ny rafitra sy ny fiaramanidina tanteraka tamin'i instrumentation rava, checklists sy ny maro hafa.
Ny P-40X in lahatsary